Madaxweyne Waare oo baaq u diray dowladda dhexe iyo QM. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Madaxweyne Waare oo baaq u diray dowladda dhexe iyo QM.
Madaxweyne Waare oo baaq u diray dowladda dhexe iyo QM.
Muqdisho (SNTV)- Maxammed Cabdi Waare oo la hadlayay warbaahinta ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya QM dadka ka soo jeedo Hirshabeelle iyo Soomaalida inteeda kale in ay wax ka qabtaan sidii loo caawin lahaa fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle.
Baladweyne oo xarun u ah gobalka Hiiraan ayaa uu saameyn ballaaran ku yeeshay fataahadda wabiga shabeelle iyadoo sidoo kale uu wabiga dhinacyada uu jabsaday meela kamid ah xarunta dowlad gobaleedka Hirshabeelle ee jowhar.
Xilliyadan oo kale marka uu roobka ka da’o Soomaaliya ayaa wabiyada dalka ku fatahaan meelaha ay ka maraan goballada dalka, waxaana wabiga Shabeelle uu badi saameyn ku yeeshaa meelaha uu maro gaar ahaan deegnada uu ka maro goballada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan.
Previous articleShan musharax oo isku diiwaan geliyay qabashada xilka gudoonka golaha shacabka.
Next articleWasiirka wasaradda arimaha dibada oo dhigiisa Turki kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal